Green izinqubo okumelwe Coffee - iwumkhiqizo empeleni esasisesisha phezu Russian emakethe onikwa kwesisindo. Effect Its okuye kwabonakala ososayensi ngo-2012, kodwa-ke, cishe ngokushesha futhi waphikisa, kodwa okuningi wokubuyekezwa okuvumelekile mayelana nomkhiqizo bathi ubhontshisi unroasted namanje ukusiza ukuqeda kwenani elithile amakhilogramu. Kulesi sihloko sibheka indlela yokwenza ikhofi green kwesisindo ukuze balahle enkulu isisindo kungenzeka esikhathini esifushane. Ngaphezu kwalokho, uma okungenani kanye ezimpilweni zabo ekulungiseleleni ikhofi njalo e Turku noma French-cindezela, landela imiyalelo uzobe hhayi ngesikhathi esinzima zonke.
Indlela yenza oluhlaza ikhofi neminye
Ukuze kulungiswe inkomishi isiphuzo esiqabulayo uzodinga isipuni unroasted zekhofi, okuyinto kudingeka ugaye e grinder ikhofi elinamandla, ethafeni akukho okuhle. Iqiniso lokuthi eluhlaza, wawoma kalula, ubhontshisi okugazingiwe Kunzima kakhulu, grinder inhlukano ngakho noma ezivamile, nakuba ikwazi ugaye izinto zokusetshenziswa, kodwa uzohlala izingcezu ezincane. Zingase ziyekwe nge pin rolling noma usebenzise pestle ukuba amazambane ochotshoziwe - ngakho jikisa imvuthu abanenkani kakhulu ubhontshisi. Bekufanele 2 amathisipuni zekhofi. Ukulungisa isiphuzo e Turku ugcwalise kubo ingilazi akuphelele yamanzi kanye nendawo on ipuleti. Phawula ukuthi, njengoba uthuthuva ikhofi green kwesisindo: kumelwe ngokuqinile landela imiyalelo ukuze uthole isiphuzo ewusizo kakhulu. Okokuqala, uketshezi kule Cezve (Turk) akufanele ubilise - ngokushesha nje ebusweni uzoqala ukuvela Bubbles ezincane, bese ususa isitsha ekushiseni uthele isiphuzo ku inkomishi. Naphezu ukunambitheka ethize, ngakho udinga ukuba baphuze ikhofi ngaphandle ubisi noshukela, kodwa bavunyelwe ukwengeza ingcosana usinamoni, ama-clove, upelepele obomvu (nayizimfundamakhwela) noma kalamula.
Indlela yenza ikhofi obuluhlaza ginger French Cindezela
Coffee ingasetshenziswa hhayi kuphela abaseTurkey, kodwa futhi French-cindezela, futhi ngaphezu ginger impande kuphela double kuzuze isiphuzo. Ukuze servings uzodinga okusanhlamvu nepepper - 2 amathisipuni - futhi ucezu ginger impande ukuba 1 cm ubude ukuba noma uthathe amapuleti elincane, noma umane grate. Beka eluhlaza French-cindezela, uthele amanzi ashisayo kakhulu (lapha, futhi, kubalulekile ukuthi kushisa, mayelana 90 degrees, kodwa hhayi abilayo) futhi ake uhlale imizuzu embalwa. Isiphuzo usulungile, ungakwazi ukwengeza izinongo aphuze sips amancane. Ngemva kwezinsuku ezimbalwa ngeke usakwazi zibangele amahloni ukunambitheka kwakhe okungavamile, futhi kwesisindo hamba kancane kulula, ikakhulukazi kusukela ikhofi green uyakwazi uyawuthiba umphangazane.
Indlela yenza ikhofi green elisetshenziselwa ukunciphisa umzimba, uma isandla ayikhona amathuluzi akhethekile
Ukuze Ezimweni ezinjalo, ungase usebenzise kahle evamile mug Ceramic: Beka izithako endishini, amboze ngamanzi ashisayo, futhi emva kwemizuzu 2-3 isiphuzo usulungile. Into kuphela, ungazami ukubeka izingxenye ukulungiselela ngangokunokwenzeka izinto zokusetshenziswa ezivela ikhofi lakho lokhu kangcono kungabi. Okungenani awukwazi ukuwaphuza, futhi uma uphumelele futhi unqobe ukunambitheka ekhathazayo, ukweqisa izidakamizwa caffeine kuzoholela-high blood pressure, palpitations inhliziyo, futhi inkinga yokungalali kahle. Manje uyazi izindlela ezintathu indlela yokwenza ikhofi green for isisindo ukulahlekelwa. Phuza njalo - izikhathi 3 ngosuku - futhi ungakhohlwa ukuthi ngesikhathi Yebo kufanele ungahlukumezi ngokweqile ikhalori ukudla. Ngokulandela leyo mithetho, uqiniseka ukuqeda 2-5 kg isisindo okweqile cishe ngemva kwenyanga.
A isaladi okumnandi futhi unempilo 'ibhulashi'.
Tangerine Ukudla izinsuku 3 nezinsuku ezingu-7. Tangerine Ukudla isisindo ukulahleka: Izibuyekezo
Turboslim isisindo okusheshayo ukulahlekelwa - eziningi isisindo ngokuhlala,
Indlela ukususa fat kusuka emakhwapheni hhayi kuphela
Ngifuna ukunciphisa umzimba, kodwa akukho amandla? Uma kakhulu ufuna, qiniseka aphumelele!
Ukupheka ekwindla ibhola for abafundi basesikoleni esiphakeme
Le filimu "Umakhelwane phesheya ikamelo": nabalingisi izindima zabo
Yini ukuxwayisa amazinyo akhe elele
Imininingwane mayelana kungani izinzipho ophuzi
Okubhaliwe Umdwebo "I Ehlasela Ingabe Ufike" Savrasov
Imali yaseGeorgia: ama-banknotes kanye nesilinganiso esiphathelene nezimali ezihola emhlabeni